Daawo: Carruur Agoon ah oo Sucuudigu Mastaafuriyey oo Canada Si Naxariis leh loogu qaabbilay | Haldoornews
Daawo: Carruur Agoon ah oo Sucuudigu Mastaafuriyey oo Canada Si Naxariis leh loogu qaabbilay
Carruur Agoon ah oo Soomaaliyeed oo Oggolaansho ka helay waddanka Canada, ka dib markii dawladda Sucuudigu dalkeeda ka Mastaafurisay, ayaa toddobaadkan Waxbarashada Iskuulka ka bilaabay magaalada Winnipeg ee Canada oo si fiican loogu qaabbilay.
Qoyskan ayaa 14-kii bishan Janaayo laga qaaday dalka Sucuudiga oo ay ku noolaayeen, ka dib markii uu u Dacwooday Walaalkood oo si Qaxootinnimo ah ku galay Canada. Waxaana ka qeyb qaatay in Carruurtan Canada la geeyo Hay’adaha Hospitality House Refugee Ministry iyo Rupert’s Land oo taageero ka helaysa Shacabka Canada ee dhaqaalaha ugu deeqay kharashka ku baxay Safarkooda.
Carruurtan Aabbahood ayaa ka shaqeyn jiray Qunsuliyadda Jeddah ee Soomaaliya, waxaanay Sharcigooda waayeen markii Waalidkood ay dhinteen.
Carruurtan oo gaadhaya 11, ayaa isugu jira Wiilal iyo Gabdho, isla markaana ku dhashay dalka Sucuudiga, balse aan wax sharci ama deggenaansho ah ka helin Boqortooyada Sucuudiga. Qoyskan, ayaa muddo dheer si cabsi ah ugu noolaa dalka Sucuudiga ka dib markii la sheegay in loo tarxiilayo dalka Soomaaliya oo aanay Carruurtan weligood arag.
Wiilka ugu weyn Qoyskan oo la yidhaahdo Fahdi Ismaaciil, ayaa isagoo 16 sano jir ah si tahriib ah ku galay waddanka Canada, halkaasoo uu uga dacwooday Carruurta la dhalatay, waxaanu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in dalka Canada loogu keeno walaalihiis oo Gabadha ugu yar ay jirto 18 bilood, halka inta kale Carruurta ay u dhaxeyso 8 sano illaa 16 sano jir aan qaarkood weligood wax iskuul ah tegin.
Halkan Hoose, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Warbixin Muuqaal ah oo ka hadlaysa, isla markaana muujinaysa qaabkii Carruurtaas loogu qaabbilay Waddanka Canada oo ay hadda waxbarashadooda ka bilaabeen markii ay gaadheen, ee Daawasho wacan oo wanaagsan:-